I-LG V50 5G: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-LG isishiyile ngobuninzi bezinto ezintsha ekunikezelweni kwayo kwi-MWC 2019. Ecaleni kwe-LG G8 ThinQ yakhouphawu lwaseKorea Usishiyile nge-LG V50 5G. Yi-smartphone yokuqala ene-5G yohlobo. Yongeza ku Xiaomi Mi Mix 3 5G kunye Huawei Mate X, iimodeli ezimbini ezibonisiweyo namhlanje ezifika zombini zihambelana ne5G. Ke izikrokro zokuba iza kuduma kumsitho ziyazaliseka.
Inkampani iwumangalisile umsitho ngokunikezela ngeemodeli zayo ezimbini zokugqibela. Le LG V50 5G ayimi ngaphandle kuphela ngokuba ne-5G. Sijongene nesiphelo esihle esihle, esinesikrini esikhulu, ikhamera yangemva kathathu kunye nekhamera engaphambili emibini, phakathi kwabanye.
Ngokuba nenkxaso ye5G, esi sixhobo sinakho Snapdragon 855 njengeprosesa ngaphakathi. Ukongeza, ikwavelela into eyongezelelweyo ivumela ukubonelela ifowuni ngescreen sesibini. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukubheja okunomdla kakhulu kwindawo yenkampani yaseKorea.
1 Ukucaciswa kwe-LG V50 5G
2 Izikrini ezimbini ze-LG V50 5G
Ukucaciswa kwe-LG V50 5G
Ngokumalunga neenkcukacha, i-LG V50 5G okanye i-ThinQ 5G yindawo ephezulu. Ke sinokulindela i-smartphone enamandla. Ukongeza ekuhlawuleni ingqalelo ekhethekileyo kwiikhamera. Ngamandla amaninzi kunye nokubanakho kwesikrini sesibini, sinethemba lokuba lukhetho olufanelekileyo xa kufikwa kumba wokudlala. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-LG V50 5G
Umzekelo V5 5G
Isikrini I-6.5 intshi OLED ene-QHD + isisombululo se-3120 x 1440 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
Ikhamera yangaphambili MP nge f / 8 + 1.7 MP nge f / 5
Conectividad I-Bluetooth 5.0 GPS FM Radio USB-C 5G WiFi 802.11 a / c
Ibhetri I-4000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Siyabona ukuba le modeli Izabelo ezithile ze-LG G8 ThinQ. Isikrini siyafana, ngaphandle kobungakanani. Sifumana iprosesa efanayo kuzo zombini iimodeli, i-Snapdragon 855. Kwakhona indibaniselwano efanayo ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Kwakhona, iikhamera zayo zangasemva ziyafana. Nangona sidibene neekhamera zangaphambili ezahlukeneyo. Kwakhona ibhetri ye-LG V50 5G yahlukile, kule meko inkulu.
Kodwa kuyacaca ukuba uphawu lwaseKorea usishiyele ezimbini eziphezulu zoluhlu, Abizelwe ukuba babini beenkokheli kuluhlu oluphezulu. Yintoni egqithisile, uphawu luye lwalibazisa ukumiliselwa kwefowuni esongekayo ukugxila kwiimodeli zayo kwaye iphinde ibuye kwindawo yayo yentengiso kwi-Android.
Izikrini ezimbini ze-LG V50 5G
Iscreen esikabini ligama lale nto ukuba uphawu luye lwasungulwa kwesi siphelo. Yisixhobo esinokubeka kwifowuni kwaye ngenxa yoko sibe nescreen sesibini. Sifumana isikrini esongeziweyo esingu-6,2-intshi, kunye nepaneli ye-OLED kunye nesisombululo esipheleleyo seHD + Zeziphi izithembiso zokuba siscreen esinamandla kakhulu, esinokunika isixhobo amathuba amaninzi xa usisebenzisa.
Inobunzima obuyi-131 gram, ke xa isetyenziswa kunye nefowuni, sifumana ubunzima bebonke obungama-317 gram xa uyisebenzisa. Ukudibanisa isixhobo, esi sixhobo sisebenzisa Unxibelelwano ngeepiki ezintathu. Ngokuqinisekileyo kunokuba yinto enokuphumelela kakhulu. Nangona ixhomekeke kwixabiso eliza kuba nalo ekumiselweni kwayo, ekungaqinisekiswanga ngalo mzuzu.
Eminye, ukuba sigxila kule LG V50 5G ifika inzwa yeminwe ngasemva. Kwikhamera yangaphambili sinesixhobo sokuvula ebusweni. Iqinisekisiwe into yokuba ifika kunye nesiqinisekiso se-IP68 sokukhuselwa emanzini. Yeyiphi eqinisekileyo yokunceda abasebenzisi abaninzi. Ngokuphathelele kwinkqubo yokusebenza, ifowuni sele isungulwe ngokwendabuko ngePie yePie.
Njengakwi-LG G8 ThinQ, uphawu Akakaxeleli nto malunga nokwaziswa okwangoku ukusuka kwifowuni ukuya kwintengiso. Asiyazi imihla eza kuphehlelelwa ngayo, kananjalo asazi nexabiso eliza kuba nalo. Ke kuyakufuneka silinde iintsuku ezimbalwa de sazi banzi ngayo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kuya kuba ngumdla ukwazi ixabiso lesixhobo, esingasayi kubiza kakhulu, ngakumbi ngenxa yobukho be5G kuyo.
Siza kujonga kwiindaba ezingakumbi malunga nokumiliselwa kwe-LG V50 5G. Nangona ucinga ukuba yimodeli ene-5G, kuya kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa. Kuba sibona ukuba ezinye ii-smartphones ezine-5G zizokwaziswa njani ngoJuni, okanye phakathi enyakeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG V50 5G: Iselfowuni ye-LG yokuqala ye-5G kwividiyo
I-Apple Music iya kuhambelana neKhaya likaGoogle